Zac Efron wuxuu joojiyay u ekaanshihiisa | TeraNews.net
Zac Efron wuxuu joojiyay inuu u ekaado sidii naftiisa
qoraaga Kravetz Pavel La daabacay 24.04.2021
Astaanta galmada ee qarniga 21-aad, Jilaaga Hollywood-ka ah Zac Efron ayaa si aan fiicneyn uga yaabsaday taageerayaashiisa. Uguyaraan, inta badan xidigaha raacaya baraha bulshada ayaa sameeyay kacdoon sababo laxiriira isbadalada qariibka ah ee sawirada la cusbooneysiiyay.
Zac Efron wuxuu joojiyay inuu ahaado sidiisa oo kale
Wax walba waxay ku bilaabeen xaqiiqda ah in jilaaga uu daabacay warka ah inuu kala tagay saaxiibtiis Vanessa Valladares. Sababta lama cayimin, laakiin waxaa la dhihi karaa iyadoo si hubaal ah loo qabo sababo la xiriira jadwalka filim duwanaan ee dalal kala duwan awgood.
Warkaas oo ay weheliso, xidigta Hollywood-ka ah ayaa soo dhigtay sawir ay iska qaaday. Waxay ahayd sawirkan markii uu bilaabmay kororka adduunka ku hareeraysan Zac Efron. Marka la soo koobo, sheegashooyinka jilaaga waxay u egyihiin sidan:
Qadka daanka ee Zach ayaa wejigiisa ku yeeshay qaab laba jibbaaran. Way cadahay in muuqaalada Spartan ee wejiga ahi ay dhiiran yihiin, laakiin si dhakhso leh u beddelashada qaabka wejiga waxa lagu samayn karaa oo keliya qalliin.
Jilaagu si dhakhso leh buu u helay murqaha oo naftiisuu nafis ka dhigtay. Tani xitaa way ka baxsan tahay awoodda xirfadlayaasha. Aan ku xuso jilayaasha jadwalkooda mashquul iyo cunnada fudud maalintii oo dhan.
Difaaca Jilaaga Cool Hollywood ee Badbaadiyeyaasha Malibu
Iyadoo ay weheliso faallooyin diidmo ah oo ku saabsan beddelka muuqaalka xiddiga Hollywood, waxaad ka heli kartaa dib u eegis togan. Zac Efron runtii wuxuu u muuqdaa mid qabow. Iyada oo leh astaamaha iyo muuqaalka wajiga ah, waxaad sheegan kartaa doorka ugu weyn filim kasta oo ficil ah.
Jilaaga laftiisa ayaa iska ilaaliya inuu ka jawaabo su'aalaha ku saabsan faragelinta qalliinka. Xaqiiqdii, dhib malahan. Si kastaba ha noqotee, qof waliba waa gar-qaadaha aayihiisa. Midkoodna taageerayaasha xaq uma laha inay cambaareeyaan Zac Efron. Hal maahmaah ayaa halkan ku habboon - "Way fududahay inaad ku aragto dhibic isha qof kale, laakiin ma ahan aayatiin inaad ku aragto geed ishaada ku jira." Aynu u rajeynno Zach nasiib wacan mashruucaa cusub ee uu sida xarrago leh ugu beddelay nin arxan daran.
MINI PC Beelink GKmini 8/256 leh Windows 10 - dulmar guud
Waa maxay cabitaannada qabow ee ugu fiican in la cabbo kuleylka xagaaga
TV-yada fiiqan - 4K iyo Bezelless DL iyo DN Series
Kee baa fiican in la iibsado TV - leh ama aan lahayn Smart TV
Naqshadaynta gudaha - maxaad dayactir la'aan u sameyn karin
G50S - kontoroolka fog ee TV-BOX: dulmar guud, aragti
Waxa aad kula qaadatid socodka: liiska waxyaabaha muhiimka ah
Windows 11 - Shuruudaha qalabka ayaa ku duugi kara nidaamka biqilka
Apple iPhone SE 2022 ayaa ku celin kara masiirka iPhone Mini
Netflix - waxaan horeyba u haysanay macaamiil 200 ah
Waxyaabaha loo yaqaan 'Santa Santa Inspiration 2018: chic in Korean
Barnaamijyo loogu talagalay feerka TV-ga: dib u eegis, talooyin
JBL Charge 4 - afhayeen sare oo leh Power Bank
Asus TUF Gaming VG27AQ Monitor - Dib u eegis daacad ah